Porto Riko: Nahazo Medaly Alimo i Javier Culson · Global Voices teny Malagasy
Porto Riko: Nahazo Medaly Alimo i Javier Culson
Voadika ny 10 Aogositra 2012 8:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Español
Nametraka tantara ilay atleta amin’ny Olaimpika Javier Culson (@JavierCulson) tamin’ny nandrombahany ny medaily sabamena (alimo) tamin’ny taranja hazakazaka 400 metatra misy fefy tamin’ny Lalao Olaimpika 2012 ao Londres. Ity no medaily Olaimpika voalohany azon’i Poerto Riko taminà lalao hafa ankoatra ny lalao ady totohondry. Tamin’ny medaily azon’I Culson, efa fito ankehitriny ny fitambaran’ny medaily Olaimpika azon’i Poerto Riko: sabamena enina ary volafotsy iray. Ity ihany koa ny medaily voalohany azon’ny atletan’i Poerto Riko hatramin’izay nisian’ny lalao Olaimpika tamin’ny taona 1996 izay. Dibo-kafaliana ihany koa ny faritry Karaiba tamin’ny medaly volamena azon’ilay Dominikana, Félix Sánchez “Super Félix” tamin’ ity taranja ity.
Culson no iray amin’ireo mahery indrindra handrombaka ny medaily volamena amin’ny taranja hazakazaka 400 metatra misy fefy. Teo amin’ny toerana faharoa kosa, nahazo ny medaily volafotsy, Michael Tinsley avy ao Etazonia Amerika.
Karazana fandresena mamy ho an’i Porto Riko ny fahazoana medaily alimo. Na dia tsy nahazo medaily volamena efa nandrandraina mafy ho an’ny firenena aza ireo atleta, dia tsy mba diso fanantenana mihitsy fa mbola nampiseho hatrany ny hafaliany tamin’ny alalan’ny Twitter ny olona tamin’ny medaily azon’ i Culson:
@hiramart: Resy i Culson? Hitako tao amin’ny sehatra izy ary nisalotra medaily, izay araka ny fahafantarako azy dia medaily voalohany ho an’I Porto Riko.
@Flamencole: @JavierCulson efa nametraka tantara ianao tamin'izay vitanao! #PuertoRicoEstaContigo (manohana anao I Porto Riko)
@adriibabiix3: Tena afa-po tanteraka aho fa nametraka an’i Porto Riko anaty sarintany i @JavierCulson. Nampiray ny firenentsika ianao tamin’ny alalan’ny zavatra mahafinaritra, izany no tena hoe Porto Rikana.
@hilda920: Misaotra Culson! “@csantarrosa: Afa-po tamin’ny zava-bitan’i @JavierCulson, tohizo hatrany ny ezaka!! Misaotra nametraka an’I Porto Riko anaty sarintany!”
‏@exorKshii58_PR: @JavierCulson orgulloso de tu logro y de poner nuestra islita en lo mas alto…para nosotros si t ganastes la de #ORO caballete exito 🙂
@exorKshii58_PR: @JavierCulson Afa-po tamin’ny zava-bitanao sy tamin’ny fampahafantarana ny nosikelintsika…aminay, tahaka ny efa nahazo ny #ORO (volamena) ianao, tena tsara! 🙂
Nampiseho ny fanohanany an’i Culson ihany koa ilay mpilalao baskety Porto Rikana José Juan Barea:
@jjbareapr: @JavierCulson arahabaina, asa mahavariana, manohana anao hatrany …coqui
Tranga manantantara hafa ho an’i Porto Riko
Ilay mpanao fanatanjahatena Tommy Ramos (@TommyRamos_pur) no Porto Rikana voalohany hifaninana amin’ny taranja “anneaux”, nahavita 15.6 izy. Na dia tsy nahazo medaily aza izy ( nihintsana teo amin’ny toerana faha-enina), tsy mbola nisy Porto Rikana nahavita ezaka toy izany tamin’ny taranja zimnastika.